म भर्खर ठूलो हुँदैछु - पुरुष - नारी
म भर्खर ठूलो हुँदैछु
अहिले म आफ्नो चौथो चलचित्र ‘लभ डायरिज’ मा व्यस्त छु ।
मोडलिङ र चलचित्रबीच के–कस्तो फरक पाउनुभयो ?
मेरो करिअर मोडलिङबाट सुरु भएकाले म र्‍याम्पमा पूरै आत्मविश्वासका साथ हिँड्छु । चलचित्रमा भने अभिनय, आवाज आदि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले केही गार्‍होसमेत भयो । अहिले आएर अभिनयमा मज्जा लाग्न थालेको छ । ममा यसको नशा चढ्दैछ ।
तपाईंलाई कुन नायिकाको अभिनयले आकर्षित गर्छ ?
म रिचा शर्मा र मेनुका प्रधानको अभिनयको प्रशंसक हुँ ।
राम्री लागेकी नायिका ?
नायिका रुविना थापा ।
आगामी चलचित्रमा कोसँग काम गर्न पाएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
सौगात मल्ल, विपिन कार्की तथा मेनुका प्रधानसँग ।
त्यसो भए तपाईंमा थिएटरका कलाकारहरूको प्रभाव छ, होइन ?
पक्कै पनि हो, त्यसैले मैले आफ्नो पहिलो चलचित्र होस्टेल रिटन्र्सपछि अनुप बरालसँग अभिनयको प्रशिक्षण लिएँ ।
महिलाहरूको मन नपर्ने बानी ?
मेकअप धेरै गर्ने र समय–समयमा ऐना हेरेर मेकअप मिलाइरहने बानी पटक्कै मन पर्दैन ।
विवाहको विषयमा सोच्नुभएको छैन नि ?
विचरा म, भर्खर त ठूलो हुँदैछु । अहिले नै के–को विवाह ?
तैपनि ड्रिम गर्ल त होलिन् नि ?
म फिजिकल ब्युटीमा मात्र विश्वास गर्दिन । कतिपय व्यक्ति हेर्दा अत्यन्त सुन्दर हुन्छन् तर उनीहरूमा ज्ञान, बुद्धि एवं क्षमताको कमी हुन्छ । त्यसैले ब्युटी विथ ब्रेन एन्ड गुड हार्ट चाहिन्छ ।
पुस १६, २०७२ - सानो परिवारको ठूलो साइड इफेक्ट
चैत्र २, २०७० - भर्खर जन्मिएका छाउराको रेखदेख
सबै युवती उत्तिकै सुन्दर हुन्छन फाल्गुन ८, २०७४
आर्थिक कुरामा झूट बोल्छन् पुरुष माघ २१, २०७४